Maqaaxi ay fadhiyen Ciidanka Dowladda oo lagu qarxiyay – STAR FM SOMALIA
Wararka laga helaayo Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan, ayaa sheegaaya in galabta uu ka dhacay qarax, lalana beegsaday maqaaxi ay fadhiyen Ciidanka Dowladda Somaliya iyo dad shacab ah.
Qaraxa oo u muuqday mid horey maqaaxida loogu sii diyaariyay, ayaa waxaa la qarxiyay, xilli ay fadhiyen askarta iyo dadka rayidka ah, waxaana la xaqiijiyay dhimashada hal ruux oo rayid ah iyo dhaawaca sideed kale, oo askarta u badan.
Ciidan fara badan oo markiiba ku baxay maqaaxida, ayaa waxay goobaha ku dhow dhow ay ka sameeyen hawlgal lagu xaqiijinaayo ammaanka, laguna baadigoobaayo cidii qaraxaasi ka dambeysay.
Mid ka mid ah dadka Deegaanka, ayaa xaqiijiyay inay Ciidamada Dowladdu qaraxaasi u soo qab qabteen dad fara badan, oo ay ku jiraan dumar, waxayna ula dhaqaaqeen buu yiri fariisimahooda.
Saraakiisha Ciidamada iyo Maamulka Halgan, ayaan weli ka hadal qaraxa khasaaraha gaystay ee maqaaxida ka dhacay iyo dadkii loo soo qab qabtayba.
Ciidanka Xooga Dalka & Xoogaga Midowga Afrika Ee Amisom, ayaa Khamiistii dagaal kula wareegay gacan ku haynta Deegaanka Halgan, iyadoo ay horey u jooggeen Ururka Al Shabaab.